Tag: ahụmịhe ndị ahịa | Martech Zone
Kpido: ahụmịhe ndị ahịa
Iji bulie mbọ ịre ahịa ahịa chọrọ nke ọma, ị ga -achọ ọhụhụ ụzọ ọ bụla nke njem ndị ahịa gị na ụzọ iji soro ma nyochaa data ha iji ghọta ihe na -akpali ha ugbu a na ọdịnihu. Kedu otu esi eme nke ahụ? Ọ dabara nke ọma, nyocha njem ndị ahịa na -enye nghọta bara uru n'ime usoro omume na mmasị ndị ọbịa gị n'oge njem ha niile. Nghọta ndị a na -enye gị ohere ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa etinyere nke na -akpali ndị ọbịa ịbịaru
Anyị na-ekerịta ntakịrị ihe banyere inweta ma ezughi ezu gbasara njigide ndị ahịa. Nnukwu usoro azụmaahịa adịghị mfe dịka ị na-ebugharị na mbugharị, ọ bụkwa maka ịkwọ ikike ụzọ. Idebe ndị ahịa na-abụkarị akụkụ dị nta nke ego iji nweta ndị ọhụrụ. Site n'ọrịa ahụ, ụlọ ọrụ dị iche iche wedara ala ma bụrụ ndị na-eme ihe ike n'inweta ngwaahịa na ọrụ ọhụụ. Ọzọkwa, nzukọ ndị mmadụ na-enwe na nzukọ ahịa na-egbochi atụmatụ nnweta na ọtụtụ ụlọ ọrụ.